''Murtee dhumaa eeggachaa jirra,'' Beteliheem Abarraa - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Facebook
Shamarreen lammii Itoophiyaa Naaziraawiit Abarraa jedhamtu qoricha sammuu addochoo dadabarsuun shakkamte baatiiwwan muraasaan dura Chaayinaatti to'annaa jala olfamte turte amma murtee dhumaa eegataa akka jirtu obboleettiiinishee Beteliheem Abarraa BBC'tti himaniiru.
Naaziraawiiti erga dadabarsuu qoricha sammuu hadochootiin shakkamtee Chaayinaatti to'annaa jala olfamte baatii jaha darbeera.
Seerri Chaayina namni dadabarsa qoricha sammuu hadoochaan irratti argame mutreen du'aa akka itti murtaa'u hajaja. Kanaafuu maatiin Naaziraawit seerichi isheerrattis hojiirra olaa sodaa jedhuun yaaddoo keessa galu dubbatti obboleetiin.
Dhimma kanas qondaaltoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo dabalatee namoonni beekamoon itti dhiheenyaan hordofaa akka jiran himamuunsaa ni yaadatama.
Yakki qindaa'aan UK waggaatti £37bn baasisa
Biyya Chaayinaa mana hidhaa Guwaanszutti kan argamtu Naaziraawiit ALI Waxabajjii 20, 2010 yeroo jalqabaatiif mana murtiitti dhiyaatte. Isheenis qoricha sammuu hadoochuufi kokeeyiin jedhamu kg 5.2 ulfaatu haala shaampootii qophaa'e eenyu akka itti kenneefi attamiin qabachu akka dandeesse mana murtii biyyattiitti himaniiru.
Abukaatoo motummaan Chaayinaa dhaabeefis, ragaa kana dura Naaziraawiit biyyaa baatee akka hinbeekne mull'isu, yakkarraa bilisa ta'ushee, haala barnootaafi hojiishee (akka injinara taa'ee) ragaa dhiyeessuu obboleettiin Naaziraawit ibsaniiru.
Obboleettin ishees ragaawwan kanneen himannaa irratti dhiyaateef akka ragaa ittisaatti kan ergame ta'uu eeruun, ''seerri Chaayinaa cimaa ta'unsaa hinollee. Haala yaadneen deemaa hinjiru. Ta'us garuu abdii hinkutannu,'' jedhaniiru.
Gama biraatiin abbaan alangaa ammoo gochicha itti yaaduun kan raawwatteefi kan barattee taate osoo jiru dogongoraan nama harkaa fudhuun irra hinturre jechuun mormuu obboleettiin ni dubbatu.
''Yeroo lammataatiif yoom akka mana murteetti dhiyaattu guyyaan adda bahee hinbaramne,'' kan jettu Betelihem, haala seera Chaayinaatti namni tokko mana murtiitti dhiyaatee guyyaa 20 ykn ji'a tokkoon booda murtee dhumaa akka kennamuuf ragaa akka qaban dubbatu.
Haala kanaanis murtee Naaziraawiit kan dhumaa abdiin eeggachaa jiraachu nutti himaniiru.
Akka Betelehem jedhaniitti, Naaziraawitiin qaamaan argu dadhabdulleen yeroo lama xalayaa ergiteefi jirti.
"Jalqabarra ciminni dhimmichaa hingalleef ture. Nan dhufa jechaa turte. Amma garuu haalli cimaa ta'uu waan hubatteef dhiphachuu jalqabdee jirti,'' jechuun haala Naaziraawiit keessatti argamtu ibsaniiru.
Xalayicharrattis, ''nama dogongoraa amanuu kiyyaatti ofiis maatii kiyyas aarsaa baayyee kanfalchiseera. Baheen isiin boonsa,'' yaada jedhu caqasuushee himu.
Maatiinis ji'aan maallaqa muraasa akka erguuf akkasumas dippilomaatoonni Imbaasii Itoophiyaa Chaayinaatti argaman akka gargaaruufi barbaachisaa wayita ta'eettis dhaqanii akka ilaalan nutti himaniiru Beteliheem.
UK'n yakka ittisuuf waggaatti £37bn akka baastu Ejensiin Ittisa Yakkaa biyyittii beeksise